1. zokugwema ukuphuka kudivayisi ntambo ukuncela: Lapho zokugwema ukuphuka ntambo, ntambo ngobugebengu kalula kube ukusivumela out, kuzosiza ukuthuthukisa opharetha kahle. 2. Lonke indlela yokuphuma othomathikhi doffing HQF2011 doffing othomathikhi zulazulani umshini usebenzisa othomathikhi doffing lonke indlela yokuphuma, doffing inqubo enembile, esebenza kahle fast and, lula ukusebenza, futhi kulula inkinga. 3. High ukusebenza inzwa elikhulu ukungezwani emazombezombe lokulawula microcomputer ukusebenza okuphezulu inzwa test isikhundla zulazulani ngu 0.1mm ukunemba, ...
1. zokugwema ukuphuka kudivayisi ntambo ukuncela:
2. Lonke indlela yokuphuma othomathikhi doffing
3. High ukusebenza inzwa elikhulu ukungezwani emazombezombe lokulawula microcomputer
High ukusebenza inzwa yokuhlola isimo zulazulani ngu 0.1mm ukunemba, microcomputer khumbula isimo kwadambisa isimo esasishubile, ukuthi lithathelwe izimo ezihlukahlukene ukuphotha (isivinini iflaya, inombolo ivolumu), kungase kukhethwe ngokuzenzakalela isimo ukungezwani elilungile, akadingi ngesandla lapho isimo ukungezwani.
4. Flyer futhi bobbin usebenzisa ibhande isikhathi
Flyer futhi bobbin ukunyakaza ukujikeleza ngamafutha okugeza gearbox isikhathi ibhande drive mode izidingo ngesivinini ukuphotha, ke anazo okusezingeni eliphezulu yokudlulisela ukusebenza kahle. Ukuqinisekisa ibhande Ukujikeleza ovundlile, eyingqayizivele ibhande tensioner isakhiwo nge bafake awumkhulu futhi mncane umsindo ongaphakeme.
Previous: FB471 uvolo ukuphotha impukane Uhlaka
Okulandelayo: JW81 amanzi jet uhlaka lokweluka indwangu
Okuzenzakalelayo Doffing zulazulani Machine
Uvolo, zulazulani Machine
3 JW51 amanzi jet uhlaka lokweluka indwangu
JA11 460 emoyeni jet uhlaka lokweluka indwangu